Yakka Sukanneessaa Oromoo Irratti Miseensoota OPDOn raawwatama jiru
Takkale- Gabbisa, Waaggarii Jigi fi Iyyaasuu Gammadaa yakka isaan dalgana:-
Godina w/lixaa aanaa Manasibu fi Qilixu Karraa keessaa hidhatoonni OPDO samiicha irratti bobba'anii jiru. Aanaa kana keessa kan ta'e bosona daallee jedhamu keessa taa'uun hidhatoonni ganda baabboo buundii kan ta'an 1. Maaramaa Tamirat lamuu 2. Yaadataa Birhanuu fi dargaggoota ijjaruun fi hidhatoota waandii fi ilma obbo Waggaarii Jigii ta'ani uummataa gabaa Qilixu Kaarraa tii galan samuu. Keessumaa ilmi Waaggaarii Jigii kilaashii abbaa isaa qabachuun bosona daalle jedhamu keessatti dargaggoo gurmeessee saamaa jira. Manni murtii aanaa Qilixu karraa bakka argametti akka qabamu waraqaa baasee barbaadee dhabe. Garuu mucaan kun eessa iyyuu hin dhaqne guyyaa saamaa ola galgala manatti gala. Abban Isaa Waaggarii Jigi Ittigafatama Bulchisa fi Nagenya Aannaa Qilxu Karraa waan ta'ee Nami isaa gaafachuu ykn qabuu sodatan.
Kanaaf Waaggaarii jigii dhoksaa dhaan ilma isaa fi hiriyyoota mucaa isaa akkasumas hidhattoota gandaa saamicha irratti bobbaasee jira. Qabeenyi uummataa saamamee dhumeera. Bara 2004 buna kuntaala 22 mana eebbaa tuujjubaatti kan qabame, baruma kan mana hidhataa maaraama taamiraatti buna kuntaala 27 kan qabame hattoota waliin waajjira poolisii aanaa Qilixu Karraatti gaafa dhiyaatanii deebii kennan kan hanna nu barsiise Iyyaasuu Gammadaatti gaafa jedhanii deebii kennan:Iyyaasuun kun immoo dura taa'aa Nageenyaa aanaa Qilixu Karraa waan ta'eef ukkaamsanii hambisan.jalqaba bara 2005 tti ilmi Waaggaarii Jigii saamicha inni geggeesse beekamaan kessa:-
1 Girmaa Waaggaarii Moosissaa reebuun qarshii 9000 saame
2 Umar Danfaa irraa bilbilaa fi qarshii 400
3 Ittaanaa Badhaasaa irraa qarshii 3000
4 Jibiriil Ittaanaatti meeshaa dhukaasuun qarshii 12000
5 Ibsaa Abdiisaa irraa qarshii 4000
6 Gabayyoo Bulii irraa qarshii kuma 5000 fi warqee walakkaa waqeetaa saameera. Kanaaf uummanni aanaa Qilxu karraafi manasibuu gocha Waaggaarii Jigiin saamamaa waan jiruuf mootummaanis ta'e uummati tarkaanfii fudhachuu akka qabu wal tumsuun waamicha koon dabarsa. Hubachiisa Gabaasi kun daataa dhugaa ta'u isaa kan nama kamiin mirkaneessuu dandeessaniidha.
Obboo Mohammed Nagara Eebbisa iirrati yaaki sukannessa irratti rawwatameef Oromoon hundi bakka jiruu Mootumma irratti Mormi isaa akka dhagesisuu gaafacha jira. Waaggaarii Jigii fi Iyyaasuu Gammadaa uummata keenya akka qamaleetti ilaalaa hin jiran ,jarri kun yoo barbaadan ni ajjeesu, yoo barbaadan mana hidhaa galchu, yoo barbaadan hojii irraa ari'u bara 2003 nama 31 hojii irraa ari'an, hojii mootummaa fira isaani qofa galchu. Ni ga'a uummati keenya ni rakkate .
Bara 1997 Waaggaarii Jigii fi Takkale Gabbiisa Abbo Adamuu Baqalaa mana isaa keessatti halkan wallakaa kan ajjessan, guyya lama booda imoo Magaala Qilxuu karraa keessatti Rassasan Baratoota 8 rukutuun baratoota 3 Brihanee Dhufeera, Isqeel Gamada fi Asfaw Banti ajjesun, Baratoota 5 qama hirisan jiru jaroon kun deggersa mootumma fi OPDOn akka hin adabamnee godhaman angoo dabalataan argatan akka mudaman Zelalem Jemaneh waan tasisef amma ilee yakka sukaneessa itti fufan dalga jiru.
Haaluma kana bara 1998 Obbo Fiqaaduu Qajeela irratti yakka suukanneessa toruchii fi reebiicha adda adunya irratti dhorkamee irratti rawwachuudhan qama isaa hirisan jiru. Yeroo 7 fannifamee tourchii akka ta'uu godhan. Guyya lama guutuu Morma gadi Awaluun darara gudda irran ga'aan. Meseha ulfata fi Dhagga qama isaatti hidhun darara turan. Yeroo 30 Qixuu karraati yerro 7 imoo Mandi fi Gimbiti hidhuun yaaka sukkaneessa irratti dalaga jiru, Amma ilee Iccitii kana akka hin bafneef jeecha nama kana ajeesuuf yaali gochaa jiru. Mootummaa Nannoo Oromiyaa Uummata Manasibuu fi Ganda Babboo Bundi keessatti yaaki sukannessan jarsooli wagaa 60_80 irratti bara 1997 kasee hanga haraati rawwatama jiru, Nannoo sun biyya mootumman hin jiree goodhe jira.
Guyyaa tokko Mootumman kun yoo kufee haaloo ba’uun nannoo kanatti demuu maluu amuma kana Tilimamuun ilee nama sukaneessa. Mootummaan Nannoo Oromoiyya Uummataa Aannaa Manasinbuu fi qilxuukarra irrati namoota angoo mootumma seera fi heera mootumman ala fayadaman uummata akka binenesaatti itti xabatan kana irra dhaabuu dadhabuun OPDO/TPLF saba Oromoo irratti waan dalagama jiruuf itti gaafatamuun hin oluu jeena.
Kanaaf uummatti jara kana akk ofi irra dhorkuuf wamiicha goonaf. Uummanni keenya akka qiraacitti hanga yoomiitti oliif gadi darbatama? Jarri kun lamaan yoo jiraatan nama 300,000 oltu dararamaa jiraata. Jara kana har'a bori osoon hin jedhin uummatti tarkanfi itti fudhachuu dhabamsifamani uummata keenya boqochiisuu qabina jeechun uummatti Aanaa Qilxuu Karaa deggersa gaafatani jiru. Sabii koo ni gubate, iyyatees nama birmatuuf dhabe, du'ee awwaalcha dhabe, hidhamee gaaffii dhabe.
Kanaaf uu!uuuuuu!uuuuuuu,wayyoo!wayyoo!wayyoo!wayyoo! Maalo!Maaloo! Oromoo reeffi obboloota kooti, ijoollee keetii reeffa saree ta'e kaa! Mar'immaan koo nagubatee akka eelee sibiilaa na ta'e. wayyoo!kaa maloo!
Uummata Manasibuu fi Qilxuu Kara irratti yaakaa dalagme Kana Barreefaman hanga Prezidaanti Nannoo Oromiyaa Obbo Alemayoo Atomsati Uummatti yoo barreefatee ilee Xalaayan uummataa kun akka Prezidaanti Oromiya birra hin geenye goodhamee jira. Kanaafuu Sagalee keenya Media Adunya, HRW, Amnesty international Qamoomtee mootummota gamtomanti nu dhiyeessa jeechun gaafataniru.
Uummata irra iyyata Dhiyyatee